Germany: Hadii aad calan dal gubto: Sadex sano oo xabsi ah. - NorSom News
Germany: Hadii aad calan dal gubto: Sadex sano oo xabsi ah.
Foto: Johannes Fechner/Instgram
Baarlamaanka dalka Germany ayaa shaley ansixiyay sharci danbi ka dhigayo in gudaha dalka Germany lagu gubo calanka Midowga Yurub ee EU-da iyo calamada iyo sumadaha dalalka kale ee caalamka.
Ciqaabta gubista calamada dalalka kale ayaa wuxuu qofku ku muteysan karaa ilaa sadex sano oo xabsi ah.
Sharciga shaley la meelmariyay ayaa ka dhashay caro laga muujiyay dhacdo sanadkii 2017 lagu gubay calanka Israel. In la gubo calanka Israel ayaa sharci daro horey uga aheyd dalka Germany, balse sharcigan cusub ayaa qeexitaan fiican ka bixinayo ciqaabta lagu muteysan karo gubista calamada dalalka kale.
Wixii ka horeeyay hada, wuxuu qofku gubista calanka Germany iyo kan EU-da ku muteysan karay ganaax lacageed, halka gubista calamada dalalka kale aysan sharci daro horey uga ahaan jiray dalkaas.
Balse wixii hada ka danbeeyo, qofkii guba calanka Germany, kan EU-da iyo calamada dalalka kale, wuxuu muteysan karaa ciqaab gaari karto 3 sano oo xabsi ah.
Xigasho/kilde: FENGSELSSTRAFF FOR Å BRENNE ANDRE LANDS FLAGG
Previous articleSweden: Hooyo ku eedeysan dilka gabadheeda oo 3 sano jir aheyd.
Next articleSolberg: Safar dibadda ah ma jiri doono, ilaa 20-ka August.